Ko Kambani Yako Yemagariro Ekushambadzira Ekuedza Inobhadhara?
Chipiri, Zvita 15, 2020 Chipiri, Zvita 15, 2020 Douglas Karr
Vhiki rino, mutengi watiri kubvunza naye anga achibvunza kuti nei zvirimo zvavange vachishanda zvakaoma kudaro zvisingaite kunge zviri kuita mutsauko. Uyu mutengi haana kushanda kuti avandudze avo vanoteera pasocial media, panzvimbo pekushandisa kwakawanda kwekuedza kwavo mukutengesa kunze.
Isu takavapa iwo mufananidzo wehukuru hwevateereri vavo mune vezvenhau zvichienzaniswa nevavanokwikwidza navo - uyezve ndokuzopa zvayaive nazvo pamaitirwo ezvaikwikwidzana. Iwo manhamba akakura… iyo kukwidziridzwa kwevateereri vazhinji pasocial media iri kunyura kunze chero munhu wese ari munzvimbo. Kuti tikwikwidze nezviri mukati, mutengi wedu anokwikwidza pasocial media, futi!
Kuti ubudirire mukushambadzira bhizinesi rako pasocial media, unofanirwa kuisa nguva nezvinhu. Uyu muti wekusarudza unobatsira iwe kuti uone kana wagadzirira kuvhura yakazara-chiyero enhau midhiya enhau inozotungamira kune kutarisisa uye kutungamira kwebhizinesi.
Mazuva ano, ini ndinogona kuwedzera mumwe mubvunzo uye ndizvozvo kana kwete kana iwe uchigona kukwanisa kusimudzira zvemukati zvako pasocial media kuburikidza nekushandisa kwakasimudzira profiles nezviri mukati. Kana iwe uri kambani iri kungovhura yako enhau mitezo, iwe unogona kuwana traction nekukurumidza neinvestment mukuvaka vateereri vako nekukurumidza.
Rombo rakanaka kwauri, iyo social media mapuratifomu uve nemimwe midziyo mikuru uye nemikana yekunangisa kuti uzviite chete. Pane mapuratifomu akaita seFacebook, iwe unogona kutowana zvirinani kuteedzera nezvakasimudzirwa zvemukati pane kungoita kuburikidza nekambani yekambani yako.
Kuzivisa: Ndiri kushandisa yedu Wrike chakabatana.
Tags: chisarudzo mutiindasitiridzoka pakudyaraRoyievanhu vezvenhauzvemagariro midhiya zvemukatisocial media shandukosocial media kutsoropodzapasocial media curationsocial media resolution mutikubatana kwenhaupasocial media zviwanikwamagariro enhau anodzoka mukudyarapasocial media roimagariro enhau kugovanamagariro enhaumunharaunda roi